Dibanisa idatha yenkampani yakho kwilifu | Ezezimali
Dibanisa idatha yenkampani yakho kwilifu
Iindlela ezintsha zokudityaniswa kwedatha sisenzo esenziwe ziinkampani ezininzi kule minyaka idlulileyo. Ukwanelisa iimfuno zakho kwifayile ye- ukugcinwa kwedatha. Isenzo esidla ngokubanzima ngamanye amaxesha ngenxa yokuba idatha ivela kwimithombo eyahlukeneyo kwaye kwiimeko ezininzi ayihambelani. Ukuze ngale ndlela, ikwindawo yokuqinisekisa ukuba ulwazi lolunye lwezinto abathi abo banoxanduva lweshishini bazame ukuzigcina.
Kule meko ngokubanzi, kufanele kuqatshelwe ukuba eyona nto iphambili yokwenza dibanisa idatha yenkampani yakho kwilifu kukuba inkqubo emanyeneyo yenziwe ukuba yenzeke kwasekuqaleni. Ukuziqhelanisa kuthetha ukuba akuyomfuneko ukuya kumaqonga etekhnoloji aliqela ngaxeshanye. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuphuhliswa ngenkxaso efanayo okanye isixhobo. Ukuze le nkqubo ilawulwe ngendlela enengqiqo kwaye elungeleleneyo enokuthi izuze amaqela ayinxalenye yesi senzo.
Ngale ndlela, kubaluleke kakhulu ukuba ngawo onke amaxesha sikwazi ukuba yintoni iinkampani zobugcisa ezilungileyo ukutyala imali. Phakathi kwezinye izizathu, kuba inokusinika isikhombisi esingaqhelekanga malunga neendlela ezinokuthi zisetyenziswe ngoosomashishini ukugcina idatha yabo ngokhuseleko olukhulu kunye nokusebenza ngokukuko.
1 Dibanisa idatha yenkampani
2 Iinkampani apho sinokutyala khona
3 IMicrosoft Office OneNote
Dibanisa idatha yenkampani
Ukwenza eli nyathelo, kubaluleke kakhulu ukuba abasebenzisi baqwalasele izibonelelo esinokuthi sizinikwe yile nkqubo yokudibanisa ulwazi imeko yelifu. Umzekelo, kwezi meko zilandelayo siza kuthi siveze apha ngezantsi:
Ukukhawuleza okukhulu kwaye ukuphela kosuku kuya kusivumela ukuba songe ixesha elininzi ekuziseni le nkqubo ikhethekileyo.
Iindleko zigcinwa kwasekuqaleni ngokusebenzisa inkqubo enye ehlangabezana neemfuno zamashishini.
Ukulungiswa kweenkqubo zangaphakathi kwaye ngokungangqalanga kubangela ukuba ulawulo lwabasebenzi lube lolona lulungileyo kakhulu kunangoku.
Yifomathi ebhetyebhetye kakhulu kwaye, ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo, iyaziqhelanisa neemfuno ezinokuthi zithathwe ngamaxesha onke kwaye ezingasayi kuhlala zifana.
Iinkampani apho sinokutyala khona
Omnye wemizekelo ecacileyo yokuhlangabezana nale mfuno ngulowo umelwe yiDropbox. Kule meko yinkonzo yokubamba ye- iifayile ezinqamlezileyo efini kwaye iqhutywa yile nkampani yaseMelika. Phakathi kweempawu zayo ezifanelekileyo kukuba emva kwayo yonke le nto yinkonzo evumela abasebenzisi ukuba bagcine kwaye bavumelanise iifayile kwi-intanethi naphakathi kweekhompyuter kunye nokwabelana ngeefayile. Ngendlela elula kakhulu, nokuba ngabasebenzisi abanamava ekuphatheni olu hlobo lwezixhobo zetekhnoloji.
Le nkqubo yolawulo lolwazi iqinisekisa ukufikelela okufikelelekayo kulwazi olusemgangathweni kwaye phantsi kwazo zonke iintlobo zeefomathi kunye nonyango. Njengomnqweno weenkampani ezifuna ukunika impendulo kwiimfuno eziya zisiba nzima ngakumbi kwaye zifuna ukhuseleko olukhulu ukuluhambisa kunye nokuluhambisa.
I-Onedrive yenye yeendlela iinkampani ezinazo ngalo mzuzu kwaye ezisebenza phantsi kweeparameter ezifanayo kwimodeli yangaphambili. Apha unokwabelana ngeefayile, iifolda kunye neefoto kunye nezinye iinkampani okanye abantu. Zizidingo zokuba neengxaki ngokuthumela olu lwazi ngeendlela ezingaphezulu zesiko okanye eziqhelekileyo: imemori yangaphakathi kwikhompyuter okanye kwi-imeyile. Kungenxa yokuba le misebenzi inokwenziwa kuphela kusetyenziswa indlela ye- ikhonkco nge-imeyile, umyalezo obhaliweyo, iMessage okanye iinethiwekhi zentlalo.
IMicrosoft Office OneNote
Enye inkampani apho sinokutyala khona izibonelelo zethu yiMicrosoft Office OneNote, njengoko ixhaswa yenye yezona nkampani zinamandla kwezobuchwephesha emhlabeni. Inkqubo yayo yahluke kancinci kwezinye kuba iququzelela amanyathelo achanekileyo kwiinkampani. Umzekelo, ukuthatha inqaku, Ukuqokelela ulwazi kunye nezenzo zabasebenzisi abaninzi.
Ngelixa kwelinye icala, ikwanika nolunye uthotho lwezinto ezithile ezenziwa ziinkampani: ukurekhoda amanqaku yeaudio, ukufaka iividiyo ezikwi-Intanethi kwaye ekugqibeleni ukongeza iifayile kunye nolunye ulwazi olubaluleke kakhulu kubudlelwane ngaphakathi kweenkampani. Ifanelekile kakhulu kwimisebenzi, enjengemfundo, kwaye ivumela ootitshala nabasebenzi bezemfundo ukuba bazalisekise izicwangciso zabo zokusebenza Ngezenzo ezithile ezichaziweyo njengokuyilwa kwe- ithala leencwadi umxholo ohambelana nezinye iinkampani okanye abantu.
Mhlawumbi sesinye sezona zindululo zokuyila kwiminyaka yakutshanje njengoko ihlangabezana nokugqibelela kunye nokwandiswa kwezixhobo ezibonelelweyo. Kule meko ngokusebenzisa i- ulwazi lwedijithali igqibelele kuba iyavuma inkxaso eyahlukeneyo yolwazi. Ezifana neevidiyo, ukurekhodwa, iifoto kunye noluhlu olubanzi lwezixhobo zokumamela. Phakathi kwezibonelelo zayo eziphambili kukuba iyayixhasa imisebenzi ethile, ivula amanqaku amaninzi njengoko umsebenzisi efuna kwaye ubanike namagama okwahlulahlula.
Kuzo zonke iinkampani ukudibanisa idatha yenkampani yakho kwilifu. Ukuze abasebenzisi bokugqibela bakulungele uku ukuqokelela, ukuhlela, kunye nokwabelana ngezinto nabanye, ihlala iyinto yonke ukusuka kwiiprojekthi ukuya kwiiprojekthi. Apho kukuphela kosuku kukulawula okanye wabelane ngalo naluphi na uhlobo lolwazi, kodwa ngokhuseleko olukhulu xa usenza le misebenzi ikhethekileyo. Kwelinye icala, asinakho ukulibala ukuba iya iphindaphindeka kwaye ininzi indawo yabasebenzisi abakwaziyo ukubaluleka kokugcina iifayile kunye nedatha ebalulekileyo kwiindawo ezahlukeneyo. Ngokwazi ukuqinisekisa ukuba sihlala sinekopi yale datha kwaye yenye yezinto ezoyikekayo ebantwini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Dibanisa idatha yenkampani yakho kwilifu